Fumanisa ukuba ungayikhetha njani isofa efanelekileyo yegumbi lakho lokuhlala | IBezzia
Khetha isofa yakho yendawo yokuhlala
Susana Garcia | 29/03/2021 20:00 | Ukuhonjiswa, Ifenitshala
El isofa sisiqwenga esibaluleke kakhulu ebomini bethu, kuba sisithuba sentuthuzelo. Yindawo apho siphumla khona xa sifika ekhaya kwaye yiyo loo nto kufanele ukuba ibe yindawo ephambili ekuhombiseni kwethu. Ukukhetha isofa yegumbi lokuhlala kungumsebenzi onzima kuba kufuneka sikhethe kakuhle isitayile, ilaphu okanye umbala, kunye nobungakanani kunye nentuthuzelo.
Sobona izimvo ezahlukileyo xa uhombisa igumbi lokuhlala ngesofa enkulu. Le fenitshala yeyona ibalulekileyo kwigumbi lokuhlala, eyona ndawo isembindini kunye nento yokuqala etsala umdla, ke kufuneka siyikhethe kakuhle. Zininzi iintlobo zeesofa yiyo loo nto sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo.
1 Isofa yesikhumba
2 Isofa yeediliya
3 Chaise longue isofa
4 Umbala usofa
5 Iimodyuli zeesoftware
6 Iithoni ezingathath'icala kwigumbi lokuhlala
Los iisofa zesikhumba ngamaqhekeza ahlala ixesha elide ukuba sibakhathalele njengoko kufanelekile. Kulula ukuzicoca kwaye zihlala iminyaka kunye neminyaka. Kule meko, ukuthenga olu hlobo lweesofa kutyalo-mali olukhulu. Ziyabiza kakhulu kodwa zihlala ixesha elide kunamalaphu. Kungenxa yoko le nto kule meko kungcono ukhethe isiqwenga ngesitayile esilula nesilula esingaphumiyo kwisitayile. Kule meko sibona enye kwiitoni ezimdaka kodwa kukwakho nolusu kwiithoni eziluhlaza okanye ezimnyama. Kubonakala ngathi sisiqwenga esihle nesisemgangathweni.
Isitayile seediliya sinokuba lukhetho olukhulu kwigumbi lethu lokuhlala. Ukuba ungeze enye ifenitshala yezinto zakudala ungafaka isofa yeediliya. Ezi zihlala zenziwe ngofele oludala kunye nolusu kwaye zihlala ixesha elide. Banobuntu obuninzi nangona kufuneka wongeze ezinye ii-cushion ukwenza umahluko kunye nokucofa okuthambileyo. Ukuba ii-cushions zinokuchukumiseka okwangoku, siya kuba nakho ukwenza umahluko othile ukuvuselela isitayile sesofa.
Chaise longue isofa
Enye ye Ezona sofas zikulungeleyo onokuzithenga zezona zine-chaise longue. Olu hlobo lweesofa lufezekile ukuba sinendawo kwigumbi lokuhlala, kuba lisivumela ukuba silale phantsi ngokupheleleyo. Olunye lolona khetho lubalaseleyo ukuba ungathanda ukuchitha ixesha elininzi esofeni yeyokuhlala ixesha elide. Thenga isofa emthunzini ongathathi hlangothi kwaye uyokonwabela esi siqwenga seminyaka ezayo. Kule meko bakhethe ithoni emhlophe, nangona imibala ebhetyebhetye ngakumbi engwevu ihlala ikhethwa.
Omnye Olunye uluvo oloyikisayo kukukhetha isofa kwiithoni zokuzonwabisa okanye intle etsala umdla. Ngaphandle kwamathandabuzo lukhetho olunobungozi kuba kufuneka sidibanise umbala wesofa kunye nokunye ukuhombisa. Unokudibanisa ii-cushion ukuzenza zahluke kwaye udibanise imibala eyahlukeneyo ngendlela eyonwabisayo kunye noqobo. Le, umzekelo, inebala elimthubi elitsala umdla kwaye lenza isofa ibe yeyona nto ibalulekileyo kwigumbi lokuhlala.
Ukuba ufuna enye umbono oguqukayo kakhulu kuba ufuna ukuguqula indawo ukuthanda kwakho, emva koko sicebisa iisofas ezinkulu zeemodyuli. Ezi ntlobo zeesofa zenziwe ngamaqhekeza kuyilo olulula kakhulu, enemigca esisiseko kuphela. Zihlala zithengiswa kwiithoni ezisisiseko kunye nokudibanisa ngokulula. Ezinye zine-backrest kwaye ezinye azinazo, ukwenzela ukuba kwenziwe i-chaise longue okanye iisofa. Kuluvo olonwabisayo nolukhethekileyo kakhulu kulo naliphi na igumbi.
Iithoni ezingathath'icala kwigumbi lokuhlala
Enye yezona zimvo zibalaseleyo ze naluphi na uhlobo lwegumbi lokuhlala ukhetha isofa kwiithoni ezisisiseko. Olu luvo luhlala lusebenza, kuba sisiqwenga esiya kuhamba nayo yonke into. Umbala ongwevu uthandwa kakhulu ngoku kwaye kulula ukuwudibanisa, kunye nokuba ngumbala apho ukusetyenziswa kwawo kungabonakali kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Khetha isofa yakho yendawo yokuhlala
Izimbo zengubo zentwasahlobo ezinokukhuthaza